IHGM encane yokugaya i-mill - I-China HGM encane i-Powder yokugaya umgubo,Factory -PYM
Ikhaya / UMKHIQIZO / ukugaya Izinsiza kusebenza
I-HGM yochungechunge lokugaya i-micro powder yokugaya uhlobo olusha lwemishini yezimayini yokwenza i-Micro powder, impuphu ecolekile，osetshenziswa kabanzi ezimbonini zezinsimbi, izimayini, chemistry, usimende, ukwakhiwa, izinto zokuphikisa, izinto ezenziwe ngobumba.
Ikhono: 0.5-30t / h
Usayizi wokukhipha: 150-2500 Mesh (100-5µm)
Material: calcite, chalk, limestone, dolomite, kaolin, Gypsum, kanye ne-talc njll, okungaphezu kwalokho 100 izinhlobo zezinto zokwakha.
I-HGM yokugaya i-powder yokugaya iyimishini efanelekile yokukhiqiza i-powine ne-superfine powder engeyona engavuvukali, izinto ezingaphenduki futhi zibe brittle ngobulukhuni bukaMoh, njenge-calcite, chalk, limestone, dolomite, kaolin, bentonite, i-talc, mica, magnesite, akhanyise, i-pyrophyllite ne-vermiculite, njll ngaphezulu 100 izinhlobo zokwakha.
Lapho isigayo sokugaya sisemsebenzini, ukuthwala okuyinhloko nokudayela ngakunye kuqhutshwa yi-electromotor yamathuluzi amakhulu ngokusebenzisa i-minimer, futhi wonke ama-rolling wokugaya agingqa eziteshini zendandatho eziqhutshwa ngokudayela nge-plunger. Izinto ezisetshenziswayo zihanjiswa emaphethelweni epuleti lamandla okuguqula bese ziwa phansi emakamelweni okugaya lapho izinto zokucindezelwa ziphindaphindwa khona, ochotshoziwe futhi egaywe ngabathungi. Lapho-ke izinto ziwela ezingxenyeni eziningi futhi zichotshozwe futhi ziqhutshwe emhlabathini ngokuqhubekayo kube yi-Micro powder.
1. Imila yokugaya yochungechunge lwe-HGM isebenza kahle (okuphindwe kabili ngokwesisindo se-jet, ukuxuba grinder kanye ibhola mill)
2. Izinsimbi zokugaya zokugaya zingasebenza isikhathi eside (2-3 Izikhathi ezinde kunalokho okuphathelene nommbila noma i-turbo mill.
3. Ukuphepha okuphezulu kanye nokwethenjwa kwesigayo se-ultrafine (azikho izinqola ezigoqekayo nezikulufa emgodini wokugaya, ngakho-ke azikho izinkinga ezibangelwa ukugqokwa kwama-bearings noma ngezikulufo)
4. Izinsimbi zokugaya ze-HGM zibonakaliswa yi-Fineness ephezulu (usayizi wokugcina: 325-3000 Mesh, D97<5 imakrofoni)
Inombolo Yokukhala (PC)
Ijubane Elikhulu Shaft (r. p. imiz)
Ubukhulu bokufaka (mm)
Isayizi eliqediwe (um / mesh)
Usayizi wokukhipha L * W * H (m)